Ny LATAM Airlines dia nitokana ny sidina mankany Costa Rica
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny LATAM Airlines dia nitokana ny sidina mankany Costa Rica
Ny vondrona kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia hampiasa ny zotra vaovao mankany San José avy any Lima, izay manolotra ny fifandraisana amin'ireo tanàna toa an'i Santiago, Buenos Aires, São Paulo, Montevideo ary La Paz.
Ny LATAM Airlines Peru dia nitokana ny sidina tsy an-kiatoany eo anelanelan'ny Lima sy San José, Costa Rica, izay nanompo ny firenena amerikana afovoany.
Ny LATAM dia hiasa sidina telo isan-kerinandro eo anelanelan'ny tanàna roa miaraka amin'ny fiaramanidina Airbus A319 amin'ny talata, zoma ary alahady. Manomboka amin'ny volana martsa, ny LATAM dia hiasa matetika amin'ny sabotsy miaraka amin'ny sidina efatra isan-kerinandro.
Ny sidina LA2408 dia hiala ao Lima amin'ny 13:05, tonga ao San José amin'ny 15:55, miaraka amin'ny ora sidina adiny telo, 50 minitra. Ny sidina miverina (LA2409) dia hiainga avy any San José amin'ny 17:15, ary hipetraka ao Lima amin'ny 22:05 miaraka amin'ny dia adiny telo, 50 minitra (isaky ny toerana rehetra).
Ny sidina avy any ivelany sy ny fiverenana dia hifandray mora amin'ny sidina mankany / avy any Santiago, Buenos Aires, Mendoza, São Paulo, Rosario, Salta, Tucumán, Córdoba, La Paz, Antofagasta, Santa Cruz, Montevideo ary Asunción.
“Ity lalam-baovao ity dia vaovao tsara ho an'ny fizahan-tany sy ny fifandraisana any Amerika Latina, ary manamafy ny tambajotran'ireo toerana itodiana. Costa Rica dia malaza eran'izao tontolo izao noho ny karazany maro, ny fizaran-tany ary ny hetsika ivelany - ary ireo mpandeha eto amin'ny faritra dia afaka miditra amin'ity toerana ity miaraka amin'ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny hub Lima, "hoy i Enrique Cueto, CEO an'ny LATAM Airlines Group. "Amin'ny taona 2018, hanohy hanamafy ny fifandraisana eo amin'ny faritra izahay ary i Costa Rica no voalohany amin'ireo làlana vaovao 24 efa nambaranay tamin'ity taona ity, izay ahitana an'i Boston, Las Vegas, Roma ary Lisbon."
Mandritra ny taona 2018, LATAM dia hanolotra seza 66,144 amin'ny serivisiny Lima-San José.
Ivotoerana fikirizana voalohany momba ny toetrandro natomboka tao amin'ny Valan-javaboary Belzika
Efa mandeha & mandeha ny fampiharana finday Ethiopian Airlines